स्वागत नेपालको सरकारलाई प्रश्न ,अस्पतालबाटै डा’क्टरहरु बे’पत्ता भए भने के हुन्छ ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
स्वागत नेपालको सरकारलाई प्रश्न ,अस्पतालबाटै डा’क्टरहरु बे’पत्ता भए भने के हुन्छ ?
काठमाण्डौं । इण्डियाका विभिन्न अस्पतालबाट ७०० को संख्यामा अस्पतालबाटै डा*क्टरहरु गा*यब भएको हि*न्दुस्तान टाइम्स लगायतका इण्डियन सञ्चार माध्यममा प*ढिरहँदा नेपालका पनि डा*क्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुको बारेमा झन् दुःख लाग्दो जानकारी आयो ।
सर*कारले स्वास्थ्यकर्मीलाई पिपिई लगायत व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री समेत नदिई “ब*रु मर्नु तर उपचार गर्नु” भन्दै सोझै मृत्युको मुखमा धकेलेर पहिला पिपिई माग गर्ने डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भविष्यमा समेत अयोग्य ठहरिने गरी लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर काममा लाग्न धम्कीपूर्ण आदेश दिएछ । तर, अहिल्यै मुलुक चलाउन अयोग्य भइसकेका रोबोटहरुको योग्यताको बारेमा चाहिँ के हुन्छ ?
कोमाबाट देश चलाउन खोज्ने विदेशी रोबोटहरुको चाहिँ लाइसेन्सको वैधानिकता के हो ? यस्तै जबरजस्तीले गर्दा इण्डियामा डाक्टरहरु पनि मरेका मर्यै छन् । सरकारी जागीर खाए पनि वा प्राइभेट अस्पतालमै जागीर खाए पनि कर्मचारी तिम्रो नोकर हो ?
बरु तिमी चाहिँ नोकर हो जनताको, साँच्चै बुझ्ने हो भने । भ्रष्टाचार गर्न नपाएर डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि व्यक्तिगत सु*रक्षा सामग्री खरिद गर्न समेत नालायक अयोग्यहले पढेर आएका डाक्टरहरुको योग्यताको मा*पन गर्ने ?
बिना हा*तहतियार वि*श्वयुद्ध लडिरहेछन् डाक्टरहरु, उनीहरु पनि मान्छे हुन् तिमीहरुजस्ता विदेशीका रोबोट होइननन् चेतना भया । संसारमा सबैभन्दा अयोग्य मान्छे त्यो हो जोसँग पैसा छ तर चाहिएको बेला खर्च गर्न सक्दैन । चाहिएको सामान खरिद गर्ने निर्णय समेत गर्न स*क्तैन । पैसा हुँदाहुँदै सामान किन्न पाउँदा समेत सामान नकिनेर मान्छे मर्नु पर्ने बाध्यतामा पुर्यायो सरकारले । सरकारलाई त लक डाउन छैन नि !
यस्तो बेला डाक्टर स्वा*स्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा चिकित्सकहरु डा. लोचन कार्की, डा. बद्री रिजाल, डा मुक्तिराम श्रेष्ठ, डा. सुधा शर्मा लगायतले लगभग रुँ*दैरुँदै मिडिया सामु आइपुगेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डबमोजिमको आवश्यक सामग्री उपलब्ध नगराई स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्स खारेज गर्छु भनेकोमा दुःख पो*ख्नु पर्ने स्थिति आउनु भनेको यी कुशासकको अयोग्यताको प्रमाण हो ।
इटालीमा ५१ जना डाक्टरहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन्, इण्डियाका विभिन्न अस्पतालबाटै ७०० डाक्टरहरु वेपत्ता भएका छन् । नेपालमा पनि एकाएक त्यसरी सरकारले जबरजस्ती गर्ने हो भने अस्पतालबाटै डाक्टरहरु बे*पत्ता हुन सक्नेछन् । त्यस्तो स्थिति आयो भने भविष्यमा अयोग्य ठ*हरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नै पर्दैन ।
सेवालाई नै उनीहरुले आफैँ बर्खास्त गर्न सक्छन् । तिमीले जागीर दिएर उनीहरु डाक्टर बनेका होइनन् पहिला डाक्टर बनेर मात्र तिमीले जागीर दिएको हो । जीवन रहे मात्र डाक्टरले सेवा दिन्छन् । हिम्मतपूर्वक मात्र होइन “स्मार्ट” पूर्वक काम गर्ने बेला हो यो ।
मुर्खतापूर्ण हिम्मतले मात्र काम गर्ने पेशा होइन चिकित्सा भनेको ! ढुंगा मुढा गर्ने, टायर बाल्ने, बुथ लुट्ने मान्छेका टाउका काट्ने आदिजस्तो होइन चिकित्सा भनेको जो मुर्खतापूर्ण हिम्मतले मात्र गर्न सकियोस् । त्यसैले समय छँदै डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई अयोग्य घोषणा गर्छु भन्ने अयोग्यहरुले सोच ।
Previous विगतका पी’डाको आनन्द अर्थात् नोस्ताल्जिया,पहिलाे चाेटी हात धुन सिकाउने हंगेरीका एग्नस से’मलवाइज हाेइनन्!
Next ने’कपाकै नेताको दाबी, स्वा’स्थ्य सामग्री खरिदमा नीतिगत भ्र*ष्टाचार भएकै हो!!